naanka Galmada: Noocyada, Sababaha, Calaamadaha, iyo Daaweynta
cillad Galmada, inkasta oo aad caadi u ah, waa mawduuc oo dadka intooda badan ay ka fogaadaan ama waa ka xishoodaan in ay ka hadlaan. Ka hor inta hadalka ku saabsan dhibaatooyinka galmada, waxaa muhiim ah in la ogaado oo ku saabsan wareegga jawaab galmada. The wareegga jawaab galmada waa taxane ah oo afar ay hay'daha isbeddelada jidheed iyo niyadeed in ay qaataan meel ka kacsiga la yeelan doono galmo. The isku xig xiga afar weji yihiin: farax, banka, idinkoo Junub ah, iyo xallinta. sobob ah Galmada, Sidaa darteed, yihiin dhibaatooyinka galmada in ay dhacaan inta lagu jiro mid ka mid ah wejiyada wareegga jawaab galmada iyo in looga hortago Liibaan raali galmada ka waxqabad kasta oo galmada la-dhiirrigelin, sida: www.spps.org/rights_and_ iyo galmada. sobob ah Galmada saamayn labada nin dadka waaweyn iyo dumarka, laakiin waa badanaaba ku badan dumarka badan ee ragga. Xaaladaha intooda badan u sobob ah galmada waa la daaweyn karaa.
Noocyada u sobob ah galmada ee Dumarka
Waxaa jira afar u sobob aasaasiga ah galmada in ay yihiin badanaaba ku badan dumarka. Kuwani waa:
Joojiyey ama hooseeyo rabitaanka galmada: Tani waa libido si fudud u yar ama la'aanta rabitaanka galmada. Waxaa sida caadiga ah waxaa keena sababaha jirka iyo / ama caafimaadka u sobob ah galmada.
disorder kacsiga: Waxay tani dhacdaa marka qof dumar ah oo uu noqdo frigid oo aan awoodin in ay ka jawaabaan ama is ismaandhaafka kasta stimulations galmada.
La'aanta jiro boosaska Champions galmada soo noqnoqda: Tani waa markii qof dumar ah oo joogto ah ku guuldareysto inuu gaaro orgasms, taasi oo horseeday inay la Jahwareer ficilka galmada.
galmada daran: Mararka qaarkood sababa qalalka hoosta iyo jagooyinka galmada qaar ka mid ah.
Noocyada u sobob ah Galmada ee Ragga
libido Low ama la'aanta hawadooda galmada.
sobob ah Kacsi - kari waayeen in ay gaaraan kacsiga ama ilaaliyaan mid.
ejaculations dhicis ah ama awood shahwo dhan ficilka galmada.
Sababaha u sobob ah Galmada Sababaha u sobob ah galmada la isugu keenaa laga yaabaa in laba: sababaha jidheed ama caafimaad, iyo sababaha nafsi. Sababaha caafimaad iyo jirka waa:
Dhibaatooyinka ay keento daawooyinka
Kelyaha iyo beerka cudurada
dheelitir la'aanta hormoon ah
Sababaha nafsi yihiin sabab u ah xasillooni guud ee maanka. Qaar ka mid ah iyaga ka mid yihiin:
In ka badan-fikirka iyo walaaca
Astaamaha u sobob ah galmada labada Ragga iyo Dumarka
Calaamadaha u sobob ah galmada waa shaqo ah oo ka mid ah noocyada xanuunada ee rag iyo dumarba, sida: yar yahay ama ka maqan rabitaanka galmada, awood u leedahay ama ay u ilaaliyaan kacsiga inta lagu guda jiro hawlaha galmada, Awood la'aanta in ay la kulmaan idinkoo Junub ah, xanuun inta lagu jiro galmada, dhibaatooyin la xiriira shahwada gudanayay, iyo adag ama sii joogi kacsaday.
Cudurka u sobob ah Galmada
Waxaa jira laba cudur weyn oo u sobob ah galmada:
qiimaynta nafsaaniga ah waxaa loo sameeyaa by therapist tababaran oo ku saleysan natiijooyinka wareysi ku saabsan taariikhda galmada iyo arrimaha galmada hadda, halka baaritaanka miskaha waxaa badanaa laga sameeyaa in kiisaska cillad leeyahay sabab caafimaad oo aan muuqan sida khafiifinta ee unugyada taranka oo hoos u barti maqaarka.
Daaweyn u sobob ah Galmada
xidhiidhka Open la galmooto ku saabsan mowduuca.
Kobcinta kicinta by isku dayaya joogtada iyo jagooyinka cusub, iyadoo la isticmaalayo qalab kula beera ubaxa sida videos, buugaag, qalabka, iwm. iyo isku siigaynayo.
Yaraynta jagooyinka xanuun badan sida xanuun qaadan kartaa iska ahaanshaha in hawshu.
Ka fogaanshada aalkolo, qaadashada xad-dhaafka ah ee daroogada, iyo sigaarka.
si sax ah looga qabanayo culayska fekerka, isbeddelo ah niyadda, buufiska iyo walwalka.
dabeecadaha dhiirigelinta non-coital sida galmada afka, siigaynayo, iwm.
Raadinta talinta terabiistayaasha tababaray saabsan mowduuca.
si joogto ah jimicsi.
firaaqada ku filan iyo nasashada.
Daawooyinka qaarkood sida Viagra, Levitra iyo Cialis sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loogu daweeyo ee qaar ka mid ah u sobob ah galmada ee ragga. Waxay iska diyaar u yihiin meel kasta, laakiin waxay u baahan yihiin daawada phD.
Be the first to comment on "naanka Galmada: Noocyada, Sababaha, Calaamadaha, iyo Daaweynta"
Leave a comment Cancel reply	Cinwaanka emailkaaga aan la daabacay.CommentMagaca *
amaahda degdegga kaarka Debit waxaa si degdeg ah noqoto habka doorashada deynsanaya online iyo deyn. Waxaa si degdeg ah, waxaa…
10 Shaqooyinka Waayo Nigeria oo doonaya in ay ku Socda Round Adduunka
Stay Connected!	RaacaskIroyin